Geekbuying သည်ကမ္ဘာ့စျေးဝယ်ခြင်းနေ့ကိုကမ်းလှမ်းချက်များစွာဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည် Androidsis
သင်၏“ fleet” ပစ္စည်းများကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအတွက်ကြိုတင်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ရန်ပင်စဉ်းစားနေပါကနို ၀ င်ဘာလသည်စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒီနိုဝင်ဘာလမှာနာမည်ကြီး Black သောကြာနေ့ကိုကျင်းပရုံတင်မကဘဲအချို့သောစတိုးဆိုင်များသည် Black သောကြာနေ့မတိုင်မီကာလများအတွင်းသူတို့၏အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်အထူးအရောင်းများကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၁၁ အတွက်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပြင်ဆင်ထားသည့် Geekbuying ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အထူးလျှော့စျေးနှင့်လက်ဆောင်များကို ၀ ယ်ယူမှုနှင့်အတူရောင်းချခြင်းအပြင်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုပေးမည့်အထူးကံစမ်းမဲများကိုလည်းကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ Xiaomi က Mi A1။ ဤတွင်ဤလာမည့်ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုထုတ်ဖေါ်။
1 ပရိုမိုးရှင်းနှင့် 11.11 မှရောင်းအား
2 နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိလက်ဆောင်များမိုးရွာမည်
ပရိုမိုးရှင်းနှင့် 11.11 မှရောင်းအား
နိုဝင်ဘာ ၈ မှ ၁၅ ရက်အထိ၊ နို ၀ င်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်ကျရောက်မည့် World Shopping Day တွင် Geekbuying သည်အထူးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထိုကာလများအတွင်းအသုံးပြုသူအားလုံးသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ ယ်ယူမှုများအတွက် ၅ ဒေါ်လာလျှော့စျေး၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူရန်အတွက်လျှော့စျေးကုဒ်များအပြင် ၂၄ နာရီအထိအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသီးသန့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Geekbuying ပရိုမိုးရှင်းအသစ်၏စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီ link ကိုအောက်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျနော်တို့ထုတ်ဖေါ် ၅ ဒေါ်လာချွေတာရန်လမ်းညွှန် ဖြစ်ရပ်တစ်လျှောက်လုံး:
မည်သည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံမဆိုအပိုဆုကြေးဒေါ်လာ ၅၀ နှင့်အထက်အပိုဆောင်းလျှော့စျေးမှအကျိုးရနိုင်သည် (ကူပွန်ကိုနိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်) ။
အောင်မြင်သောငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည့်ပထမဆုံးသုံးစွဲသူ ၅၀၀ သည်ဤလျှော့စျေးကိုခံစားနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သက်တမ်းကာလ - နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်၊ ၉း၀၀ နာရီမှနို ၀ င်ဘာလ ၁၅ ရက်ည ၉း၀၀ (UTC) အထိ။
ဖြစ်ရပ်၏တူညီသောစာမျက်နှာတွင်လည်းသင်တွေ့လိမ့်မည် စမတ်ဖုန်းများ၊ ကစားစရာများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးကူပွန်များ.
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိလက်ဆောင်များမိုးရွာမည်
လက်ဆောင်မိုးသည် Geekbuying ၏မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော devices များ, ကွာပေးလိမ့်မည် Xiaomi က Mi A1, အားကစားနာရီများနှင့်အခြားအနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းများ.
စာရင်းသွင်းရန်သင်ပထမ ဦး စွာဝင်ရောက်ရမယ် အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ, ပြီးတော့ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာ:
သငျသညျရပါမည် သင်၏ Geekbuying အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ပြီးသင်၏လူမှုကွန်ယက်များမှဖြစ်ရပ်ကိုမျှဝေပါ GIFT RAIN GAME တွင်မပါဝင်မီ။
ပါဝင်သူများသည်အောက်ပါအထူးနာရီများ၌ဆုများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ, 09:00, 12:00, 19:00 နှင့် 06:00 မှာ။
မိုးရေလက်ဆောင်များသည်သင်တန်းတစ်ခုစီ၌ (၅) မိနစ် (5:09, 00:12, 00:19, 00:06) ။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ Geekbuying အကောင့်မှသင်၏ GIFT ကိုစစ်ဆေးပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ.
Geekbuying သည် GIFT RAIN GAME ၏ဤလှုပ်ရှားမှု၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဆုများကိုပြုပြင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi Mi A1 ကိုအနိုင်ရပြီး Geekbuying ကမ်းလှမ်းချက်များဖြင့်အထူးအရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုရယူပါ
Google Assistant ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ယနေ့ရနိုင်သည်